vendredi, 14 avril 2017 22:02
Ampasimazava-Toamasina : Polisin'ny UIR nodarohin'ny Zandary
Ny tolakandro teo tokony ho tamin'ny 2ora 30min tany ho any no nitrangan'ity fikasihan-tanana teo amin'ny samy mpitandro ny filaminana ity.
Tsy mazava ireto Zandary roa ireto satria sady tsy nanao "tenue", tsy nisy "badge", tsy nisy taratasy fanaovana iraka, nefa samy nitondra basy PA. Ny fisavana natao azy ireo no tsy nahafaly azy ireo ka nidaroka avy hatrany.
Saika raikitra koa ny rombo satria nosintonin'ireo Zandary roalahy ireo ny kalaky teny an-tanan'ilay Polisy, ary izy reo diso indray no niantso namana.
Marihina fa Zandary telo izao no tazomina am-ponja vonjimaika eto Toamasina noho ny fampanofana ny basiny amin'ny jiolahy.
vendredi, 14 avril 2017 20:30
Judo: Fifanintsanana sehatra Afrika
Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fifanintsanana JUDO eo amin'ny sehatry Afrika, izay tanterahina ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina, ary mifarana ny alahady 16 avrily izao.
vendredi, 14 avril 2017 20:05
Aranta-Mahajanga : Fanampiana ho an'ireo traboinan'ny haintrano
Nidina teny amin'ny Fokontany Aranta, toerana nitrangan'ny haintrano ny alarobia lasa teo ny avy ao anivon'ny BNGRC, notronon'ny Prefen'i Mahajanga sy ny Ben'ny Tanànan'i Mahajanga.
Nanolotra fanampiana ara-tsakafo sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ho an'ireo traboina Izy ireo.
Vary 20 gony, voamaina 500 kilao, vilany miisa 40, ary lovia sy sotro no nomena ireo fianakaviana maherin'ny 50 may trano. Trano lay no honenan'ireo olona manodidina ny 162 tsy manan-kialofana.
Vonjy ranovaky ihany ireto fanampiana ireto fa mbola miantso ireo malala tanana hatrany izy ireo satria very hevitra tanteraka.
vendredi, 14 avril 2017 20:02
Sambava : Rongony 17kg no saron’ny Polisy
Nandritra ny fisafoana nataon’ny Polisy androany vao mangiran-dratsy no nahitan’izy ireo tovolahy iray nitondra entana mampiahiahy teo Antanifotsy.
Vao nahatazana ny Polisy rahateo koa ilay tovolahy dia nitsoaka ka nifanenjehana ary tsy lasa lavitra dia voasambotra.
Nanambara ny Kaomisera Tsara Nestor fa fanindroany rongony tratra tato anatin’ny herinandro ity. Mbola manentana ny rehetra ry zareo mpitandro filaminana mba hanohy hatrany fanomezana loharanom-baovao hanamora ny fanenjehana ireo olon-dratsy hanjakan’ny fandriampahalemana.
vendredi, 14 avril 2017 19:51
Mahajanga : Safidy voalohan'ireo mpitsangatsangana sy mpiala sasatra
Tsy ny Malagasy avy amin'ny faritra samihafa manerana an'i Madagasikara ihany fa na ireo teratany vahiny aza tonga rehefa vanimpotoana toy izao. Tato anatin'ny herinandro, nandritra ny fanombohan'ny fialantsasatry ny Paska, dia efa maro ireo vahiny tonga eto Mahajanga.
Misy ireo tonga noho ny fialan-tsasatra mihitsy ary misy koa ireo mpianatra manao dia fibeazana na “voyage d'étude”. Amin'ny ankapobeny, tsy niakatra ny sarandalana mampitohy an'Antananarivo sy Mahajanga fa mbola mijanona ho 30.000 Ariary (150 000 fmg).
Concert de Pâques 2017 : La Chorale Orimbato au Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga
Fidèle à son rendez-vous annuel, la Chorale Orimbato de l’Eglise FJKM Tranovatio Ambatonakanga donnera un concert de Pâques intitulé « Je chanterai ta force » au Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga ce dimanche 16 Avril à 16h.
Un répertoire composé de 10 titres sera au programme. Chants classiques des célèbres compositeurs comme G. Haendel, W.A Mozart, J.S Bach, F. Schubert seront à découvrir ou à revivre.
vendredi, 14 avril 2017 12:12
Aranta Mahajanga : Noravana ireo fanorenana rehetra tsy manara-dalàna
Nidina ifotony teny amin'ny vakim-paritra faharoa, Fokontany Aranta Mahajanga ireo tompon'andraikitra avy ao amin' ny Kaominina ambonivohitra Mahajanga nandrava ireo fanorenana tsy manara-dalàna rehetra teny an-toerana. Antony tsy maintsy nanaovana ity fanesorana ireo mipetraka amin'ny toerana tsy tokony anorenana ireto ny haintrano nitranga ny alarobia teo, izay nampanano sarotra ny mpamonjy voina ny nihazoana ny toerana nisy ny loza. Hany ka na tokony ho voafehy aza ny fiitaran'ny afo dia nampanano sarotra izany.
Manodidina ny 160 ireo traboina noho ity haintrano nitranga ny alarobia maraina ity. Tranga mihamahazo vahana eto Mahajanga tampon-tanàna ankehitriny ny fanorenana tsy manara-dalàna izay sady tsy nahazoana alalana no mbola amin'ny toerana tsy natao ho an’izany ihany koa. Tena ahitana izany ohatra ny manamorona ny lakandrano na ranomasina.
vendredi, 14 avril 2017 12:05
Fanafihana relijiozy tao Antsahatanteraka-Antsirabe : Notazomina am-ponja vonjimaika ireo 30 voarohirohy
Omaly vao vita raha nanomboka ny alarobia 12 aprily teo ny fihainoana ireo olona miisa 30 voarohirohy tamin’ny fanafihana miaro fanolanana relijiozy vavy tao amin’ny tobin-dry masera ao Antsahatanteraka-Antsirabe II nitranga ny alin’ny 31 martsa hifoha 1 aprily lasa teo.
Namoaka didy savaranonando ny mpitsara ny hitazomana am-ponja vonjimaika ireo voarohirohy rehetra, miandry ny fitsaràna azy ireo.
vendredi, 14 avril 2017 11:56
Sambava : Ambulance tratra nitatitra lavanila halatra
Fanomezam-bavaovao avy amin’ny olontsotra no nahafahan’ny Zandary nanara-maso ity fiara fitaterana marary eto Sambava ity ka omaly tamin’ny 4 ora hariva teo, raha iny nilaza fa handeha haka olona marary mafy any Ambodiampana Lokoho, tanàna any amin’ny 60 km manaraka ny lalana miazo an’Andapa, iny no sarona. Nogiazin’ny Zandary avy hatrany ilay Ambulance taorian’ny nahatrarana azy nitondra lavanila maitso halatra io.
vendredi, 14 avril 2017 11:51
Bazarikely-Tolagnaro : Mpanakanto iray tratra teo ampanaovana filan-dratsy tamina zazavavy kely 6 taona
Teo am-pikitikitihana ny fivavian'ilay zaza ity mpitendry zavamaneno aminy tarika kalaza iray eto Tolagnaro, no tra-tehaky ny renin’ilay zaza. Nitsoaka nandositra avy hatrany ilay mpanakanto ary karohina amin’izao.
Sendra irery tao an-trano ilay zaza, ny alarobia tolakandro teo, no nohararaotin’ilay mpanakanto nanaovana filan-dratsy. Efa mandeha ny fanadihadiana ataon’ny mpitandron'ny filaminana amin’izao.